Beginners အတွက် AI ကုန်သွယ်မှု- အကောင်းဆုံး AI ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းကို မေလ 2022 ကိုရှာပါ။
Beginners များအတွက် AI Trading: အကောင်းဆုံး AI Trading Platform 2022 ကိုရှာပါ
စတင်သူများအတွက်အကောင်းဆုံး AI အရောင်းအ ၀ ယ်ပလက်ဖောင်းများကိုရှာပါ။ ဒေါ်လာ ၂၅၀ သာဖြင့် စတင်၍ အတုထောက်လှမ်းရေးစက်ရုပ်ကိုသင့်အတွက်ရောင်းခွင့်ပြုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၂၀၂၀ အစီရင်ခံစာကိုဖတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ၊ MediaRave ဖြင့်ကြွယ်ဝမှုစတင်ပါ။
ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်အတူတကွစုစည်းပြီးတစ်ယောက်က algorithms နှင့်ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များကိုကြိုက်နှစ်သက်ပြီးနောက်တစ်ခုသည် online ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်သည်တစ် ဦး ဖြစ်လျှင်သင်သည်အရည်အသွေးပြည့်ဝသောပေါင်းစပ်မှုကိုရရှိသည်။ ငါတို့နှစ်ယောက်စလုံးအွန်လိုင်းကုန်သွယ်ခြင်းကိုနှစ်သက်ကွတယ်၊ ငါအရောင်းအဝယ်လုပ်ဖို့ပိုကောင်းလွယ်ကူတဲ့လမ်းချင်တယ်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကအဆုံးသတ် MediaRave ကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။
AI ကုန်သွယ်မှု။ Artificial Intelligence (AI) သည် ၎င်း၏ အလားအလာ အပြည့်အဝ မရရှိနိုင်သေးသော ထွန်းသစ်စနည်းပညာတစ်ခုဖြစ်သည်။ တကယ်တော့ AI က တစ်နေ့မှာ ရရှိနိုင်မယ့် အလားအလာတွေက အဆုံးမရှိသလောက်ပါပဲ။ ဒီလိုပြောလာတဲ့အတွက် AI ဟာ အဓိကကျတဲ့ လုပ်ငန်းအတော်များများမှာ အဓိကအခန်းကဏ္ဍကနေ ပါဝင်နေပါသေးတယ်။
Facebook သည် သင်၏သမိုင်းဝင်လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသည့်အကြောင်းအရာကို အကြံပြုခြင်းဖြစ်စေ သို့မဟုတ် ကြိုတင်ဝယ်ယူမှုများအပေါ်အခြေခံ၍ Amazon မှ ထုတ်ကုန်များကို အကြံပြုခြင်းဖြစ်စေ - AI သည် လူ့ဦးနှောက်ကို အကွာအဝေးတစ်ခုထက်ပို၍ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသည်။
ထိုသို့ပြောကြားခြင်းအားဖြင့် AI မျိုးကွဲများကိုဘဏ္marketsာရေးဈေးကွက်များတွင်ဆယ်စုနှစ်သုံးခုနီးပါးအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဘဏ်ကြီးများနှင့်အခြားဘဏ္institutionsာရေးအဖွဲ့အစည်းများသည်စျေးကွက်များအားတသမတ်တည်းစီးဆင်းစေရန်ဤ algorithms ကိုအားထားကြသည်။ AI အရောင်းအ ၀ ယ်ဖြစ်စဉ်သည်လက်လီအရောင်းဆိုင်သို့မရောက်မီအချိန်သည်ကိစ္စသာဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည် AI ကုန်သွယ်မှုဟူသည် အဘယ်နည်း၊ ၎င်းအလုပ်လုပ်ပုံနှင့် မည်သည့်ပလက်ဖောင်းများက သင့်အား ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနည်းလမ်းဖြင့် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ဝယ်ယူရောင်းချခွင့်ပြုသည်တို့ကို လေ့လာရန် စိတ်အားထက်သန်ပါက - ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်ချက်ကို သေချာဖတ်ပါ။ Beginners များအတွက် AI အရောင်းအဝယ်.
မှတ်စု: Artificial Intelligence ရောင်းဝယ်ရေးဆော့ဖ်ဝဲသည် အရင်းခံ အယ်လဂိုရီသမ်ကဲ့သို့သာ ကောင်းမွန်ပါသည်။ တစ်နည်းဆိုရသော် ဆော့ဖ်ဝဲလ်သည် ညံ့ဖျင်းစွာ ဒီဇိုင်းဆွဲထားလျှင် ငွေဆုံးရှုံးသွားနိုင်သည်။.
AI Trading ဟူသော အသုံးအနှုန်းသည် အနည်းငယ်ကျယ်ပြန့်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းသည် အလိုအလျောက် ကုန်သွယ်မှု၏ ရှုထောင့်မျိုးစုံကို လွှမ်းခြုံနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အခြေခံအကျဆုံးပုံစံ၊ ဉာဏ်ရည်တု ကုန်သွယ်မှုသည် ပုံမှန်အားဖြင့် လူသားအချင်းချင်း ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းမရှိဘဲ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ဝယ်ယူခြင်းနှင့် ရောင်းချခြင်းတို့ကို ရည်ညွှန်းသည်။ ယင်းအစား၊ အရင်းခံဆော့ဖ်ဝဲလ်သည် ၎င်းကိုလိုက်နာရန် အစီအစဉ်ရေးဆွဲထားသည့် အခြေအနေများအပေါ် အခြေခံ၍ သင့်ကိုယ်စား အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။
မသိသေးသူများအတွက်၊ AI ၏ ကျယ်ပြန့်သော အယူအဆမှာ စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း သန်းပေါင်းများစွာသော ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အခြေအနေများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်သည့် စွမ်းရည်ပါရှိသည်။ သမိုင်းအချက်အလက် အများအပြားကို အကဲဖြတ်ခြင်းဖြင့် ၎င်းသည် ထိုသို့လုပ်ဆောင်သည်။ ထို့နောက် ၎င်းတွင် ရရှိနိုင်သော အချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံ၍ ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည်။
ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းကြီးများသည် အဆင့်မြင့်ဆုံးအချို့ကို သုံးစွဲနိုင်သော်လည်း၊ ဉာဏ်ရည်တု ကုန်သွယ်စက်ရုပ်များ၊ ၎င်းတို့သည် အရင်းခံဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို အချိန်တိုင်း အလွန်စောင့်ကြပ်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ဒါက သူတို့ရဲ့ 'လျှို့ဝှက်ဆော့စ်' ကို လက်ထဲ မရောက်အောင် တားဆီးပေးတယ်။ ထို့ကြောင့်၊ လက်လီကုန်သည်များသည် ၎င်းတို့၏ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ မိတ်ဖက်များအဖြစ် AI ကုန်သွယ်မှု algorithms ၏တူညီသောအဆင့်သို့ အနည်းငယ်သာ ဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။
ထိုသို့ပြောကြားခြင်းဖြင့်သင့်အားအလိုအလျောက်ကုန်သွယ်ရန်ခွင့်ပြုသည့်အွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းများစွာရှိသည်။ ဘဏ္institutionsာရေးအဖွဲ့အစည်းများမှကိုင်တွယ်သော AI စက်ရုပ်များလောက်မတိုးတက်သော်လည်း၎င်းသည်အနည်းဆုံးသင့်ကိုအလိုအလျောက်ကုန်သွယ်ရန်ခွင့်ပြုသည် - လက်စွဲဖြင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဝယ်ယူရန်နှင့်ရောင်းရန်လုံးဝမလိုအပ်ပါ။
AI Trading ၏ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးများကားအဘယ်နည်း။
AI သည်လူ့ ဦး နှောက်ထက်သာလွန်သည်
ကုန်သွယ်ရေး ၂၄/၇ - AI ဟာဘယ်တော့မှပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုမရှိပါဘူး
AI ကုန်သွယ်ရေးဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်အခြေခံအယ်လ်ဂိုရီသမ်ထက်သာလွန်သည်
သင်၏ကုန်သွယ်မှု parameters များကို set-up ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သော manual လုပ်ဆောင်မှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု
AI အရောင်းအ ၀ ယ်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။
ထို့ကြောင့် ယခု သင့်တွင် AI အရောင်းအ၀ယ်အစစ်အမှန်မှာ အဘယ်အရာဖြစ်သည်ကို ခြုံငုံသုံးသပ်နိုင်ပြီဆိုလျှင် ဖြစ်စဉ်သည် မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကို လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။ အတိုချုပ်ပြောရရင်၊ ဉာဏ်ရည်တု ကုန်သွယ်မှုသည် သမိုင်းအချက်အလက်ပေါ်အခြေခံ၍ ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်အတူ ကုန်သွယ်မှုများကို အလိုအလျောက် စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည့် စွမ်းရည်ရှိသော ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော အယ်လဂိုရီသမ်ပေါ်တွင် ဗဟိုပြုပါသည်။ အထက်ဖော်ပြပါ ကဏ္ဍတွင် ကျွန်ုပ်တို့ အကျဉ်းချုံးဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၊ ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများတွင် စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် အဆင့်မြင့်ဆုံး AI ကုန်သွယ်မှု ဘော့တ်အချို့ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် - စျေးကွက်များကို တသမတ်တည်း ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်ပါ။
သို့သော်၊ လက်လီအရောင်းအ၀ယ်နယ်ပယ်တွင်၊ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာနယ်ပယ်တွင် ပိုင်ဆိုင်သည့်အတိုင်း အရည်အချင်းပြည့်မီသော စက်ရုပ်တစ်ရုပ်ကို သင်ဝင်ရောက်ခွင့်ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ ယင်းအစား၊ သင်သည် အခြားသူတစ်ဦးမှ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် software-based trading algorithm ကို ဝယ်ယူမည်ဖြစ်သည်။ အရင်းခံဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို 'ဘာဖြစ်ရင်' အခြေခံဖြင့် ဒီဇိုင်းထုတ်မည်ဖြစ်ပြီး၊ ဆိုလိုသည်မှာ အချို့သောအခြေအနေများနှင့်ကိုက်ညီသောအခါ နည်းပညာသည် အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
တစ် ဦး AI ကိုကုန်သွယ်မှုဥပမာ
သငျသညျအထူးပြုတဲ့ AI စက်ရုပ်ဝယ်ယူဆိုပါစို့ cryptocurrency or Forex ကုန်သွယ်။ Fibonacci Retracement level ၆၁.၈% အထိရောက်သောအခါ software ကိုအဓိက Forex pair တစုံတွင် ၀ ယ်ရန်မှာကြားရန်စီစဉ်ထားသည်။
အောက်တွင် AI စက်ရုပ်လုပ်ဆောင်မည့် 'what-if' လုပ်ငန်းစဉ်အချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြထားသည်။
GBP / အမေရိကန်ဒေါ်လာ Fibonacci Retracement အဆင့်သည် 61.8% ထိရှိသည်။
ဆိုလိုသည်မှာ AI စက်ရုပ် 'what-if' အခြေအနေကိုတွေ့ပြီဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် bot သည် ၀ ယ်ရန်အမှာစာကို GBP / USD တွင်ပြုလုပ်သည်။
ထို့အပြင် bot သည် stop-loss နှင့် take-profit အော်ဒါအချို့ကို install လုပ်သည်။
GBP/USD 45 တိုးလာပါက bot သည် ကုန်သွယ်မှုကို ပိတ်ရန် ညွှန်ကြားထားသည်။ pips.
GBP / USD 10 pips လျှော့ချလျှင်ကုန်သွယ်မှုပိတ်ရန်ညွှန်ကြားထားသည်။
အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ပြီး ၂ နာရီအကြာတွင် GBP / USD သည်2pips အထိတက်သဖြင့်ကုန်သွယ်မှုကိုပိတ်ထားရသည်။
အထက်ဖော်ပြပါ ဥပမာမှ သင်တွေ့မြင်ရသည့်အတိုင်း၊ ဉာဏ်ရည်တု trading bot သည် သင် ခက်ခက်ခဲခဲ လုပ်ဆောင်ရန် မလိုအပ်ဘဲ အမှာစာ အများအပြားကို တင်နိုင်ခဲ့သည်။ တကယ်တော့၊ bot သည်သမိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၏အစုအဝေးများကိုစကင်န်ဖတ်ရုံသာမကပါ။ GBP/USD၊ ဒါပေမယ့် 'ခုန်ပေါက်'ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ အားလုံး အဓိကငွေကြေး။ ထို့ကြောင့်ဤဥပမာသည်မှန်ကန်စွာဒီဇိုင်းဆွဲထားလျှင်ကောင်းမွန်စွာပရိုဂရမ်လုပ်ထားသော bot တစ်ခု၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကိုဖော်ပြသည်။
AI Trading ၏အကျိုးကျေးဇူးများမှာအဘယ်နည်း။
ဒါကြောင့် အခုအချိန်မှာ AI ကုန်သွယ်မှုက ဘာလဲဆိုတာနဲ့ အရင်းခံဆော့ဖ်ဝဲကို လက်တွေ့မှာ ဘယ်လိုလည်ပတ်နိုင်မလဲဆိုတာကို အခိုင်အမာ ဆုပ်ကိုင်ထားနိုင်ပါပြီ။ AI အရောင်းအ၀ယ်တင်ပြသည့် ပဓာနနမူနာအချို့ကို ကြည့်ကြပါစို့။
🥇အကန့်အသတ်မဲ့ Data Analysis
အသုံးပြုခြင်း၏ အထင်ရှားဆုံး အကျိုးကျေးဇူးများထဲမှ တစ်ခု ဉာဏ်ရည်တု ကုန်သွယ်မှုစက်ရုပ်သည် အကန့်အသတ်မရှိ ဒေတာသုတေသနပြုရန် ၎င်း၏စွမ်းရည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ကျွမ်းကျင်သော ကုန်သည်တစ်ဦးဖြစ်ပါက၊ သင်သည် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကိစ္စတွင် မည်မျှအရေးကြီးသည်ကို သင်ကိုယ်တိုင် သိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အွန်လိုင်းကုန်သွယ်။ ၎င်းမရှိလျှင်အောင်မြင်သောအရောင်းအ ၀ ယ်များကိုတသမတ်တည်းပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သောကိရိယာများကိုသင်တပ်ဆင်ထားမည်မဟုတ်ပါ။
ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည် ကုန်စည်စီးဆင်းမှု အားကောင်းသူ တစ်ဦးဖြစ်သည် ဆိုကြပါစို့။ ၎င်းသည် မည်သည့်အရာမှ ပါဝင်နိုင်သည်။ ရှေ, ငှေပလက်တီနမ်၊ ဆီ, သဘာဝဓာတ်ငွေ့, ဂြုံ, အများကြီး, အများကြီးပို. အမှန်တကယ်တွင်၊ သမိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာရန် လိုအပ်သောအချိန်ကို ဖြုန်းရန် မဖြစ်နိုင်ပေ။ အားလုံး အထက်ဖော်ပြပါ၏ ကုန်စည်. ဆန့်ကျင်ဘက်တွင်၊ အတွေ့အကြုံရှိသော ကုန်သည်များသည် များသောအားဖြင့် ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုတည်းသို့ သာလွန်သွားကြသည်။
တစ်ချက်အနေနှင့်၎င်းသည် 'အားလုံးသောကုန်သွယ်ရေး၏ Jack' ဖြစ်ရန်ကြိုးစားခြင်းထက်သင့်အနေဖြင့်ပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းအစားတစ်ခုတွင်ကျွမ်းကျင်မှုကိုရယူရန်ခွင့်ပြုခြင်းကြောင့်အကျိုးရှိသည်။ သို့သော်ဤအချက်ကသင်သည်အရောင်းအ ၀ ယ်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအခွင့်အလမ်းများကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးဖွယ်ရာရှိသည်ဟုဆိုလိုသည်။
ထိုသို့ပြောကြားခြင်းဖြင့်ကောင်းမွန်စွာစီစဉ်ထားသော AI ဆော့ဝဲလ်ပရိုဂရမ်သည်သင်ဆန္ဒရှိသလောက်ပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းများကိုအဆင့်မြင့်နည်းပညာဆိုင်ရာသုတေသနပြုလုပ်ရန်စွမ်းရည်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် bot သည်သင့်အတွက်ခက်ခဲသောအလုပ်များကိုပြုလုပ်သည်။ သင်ရှေ့တွင်လိုအပ်သောဒေတာတွေ့ရှိချက်များကိုရရှိသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင့်အားကျောက်ကပ်ကိုလွှဲပြောင်းရန်ခွင့်ပြုသည်။
Trading အရောင်းအ ၀ ယ်ကိုဘယ်တော့မှမရပ်ပါနှင့်
သင်သည် အသစ်စက်စက် ကုန်သည် သို့မဟုတ် သင့်ခါးပတ်အောက်တွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ အတွေ့အကြုံရှိသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်စေ - သင်၏ကုန်သွယ်မှုတွင် မြှုပ်နှံထားနိုင်သည့် အချိန်များစွာသာရှိသည်။ ၎င်းတွင် ဒေတာစုဆောင်းခြင်းအဆင့်သာမက အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ခြင်း၏ အမှန်တကယ်လုပ်ငန်းစဉ်လည်း ပါဝင်သည်။ အင်ဂျင်ကို မီးရှို့ရန် ကြိုးပမ်းသူများသည် အရောင်းအ၀ယ်များကို ဆင်ခြင်တုံတရားမဲ့သော ပုံစံဖြင့် ထားရှိနေခြင်းကို နောက်ဆုံးတွင် တွေ့ရှိမည်ဖြစ်သည်။
၎င်းသည် ဖြန့်ကျက်ပြီး နာရီတိုင်း အနားယူရန် လိုအပ်သော လေကြောင်းထိန်းချုပ်ရေးကိရိယာများနှင့် မတူပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အခန်းကဏ္ဍသည် အလွန်အမင်း စိတ်ပိုင်းနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အပ်နှံမှု လိုအပ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ AI ကုန်သွယ်မှုပရိုဂရမ်ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်သင့်အားတစ်နေ့လျှင် ၂၄ နာရီ၊ တစ်ပတ်လျှင် ၇ ရက်ကုန်သွယ်မှုပြုနိုင်သည်။ အရေးကြီးသည်မှာ၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုနှင့် ဆင်ခြင်တုံတရားမဲ့မှု၏ တကယ့်ခြိမ်းခြောက်မှုများကို မကြုံတွေ့ရဘဲ ၎င်းသည် ထိုသို့လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
ကုန်သွယ်မှု ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု နှင့် ဆင်တူသော သဘောအရ သင်သည် သတ်မှတ်ထားသော အချိန်မရွေး စျေးကွက် အရေအတွက် အများအပြားကို ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရန် စွမ်းရည်သာ ရှိပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည် တိုကျိုစတော့အိတ်ချိန်းနှစ်ခုလုံးကို ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ နှင့် ၁၄ နာရီကြာကွာခြားမှုကြောင့် NASDAQ ။
၎င်းသည် လန်ဒန်စတော့အိတ်ချိန်းနှင့် သြစတြေးလျ ငွေချေးစာချုပ်များကို ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသည့် ကိစ္စလည်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ သင်သည်သင်၏ဒေသစံတော်ချိန်ကိုထင်ဟပ်သောစျေးကွက်များကိုကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ရန်လိုလိမ့်မည်။
သို့သော် AI အရောင်းစက်ရုပ်၏စွမ်းရည်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်ဆန္ဒရှိသလောက်စျေးကွက်များကိုတစ်ရက်လျှင် ၂၄ နာရီ၊ တစ်ပတ်လျှင် ၇ ရက်ရယူနိုင်သည်။
အွန်လိုင်းကုန်သည်အားလုံး၏ ၇၅% နီးပါးသည်ရေရှည်တွင်ဆုံးရှုံးရသည့်အဓိကအကြောင်းရင်းများထဲမှတစ်ခုမှာလူတစ် ဦး ချင်းစီအနေဖြင့်အတက်အကျများနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုမကိုင်တွယ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ တစ်နည်းဆိုရသော်ကောင်းမွန်စွာစဉ်းစားထားသောကုန်သွယ်မှုသည်လမ်းကြောင်းမှားသွားသောအခါကုန်သွယ်ရေးသမားအသစ်များသည်၎င်းသည်ကုန်သွယ်မှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသာဖြစ်ကြောင်းလက်ခံရန်ရုန်းကန်နေရသည်။ တုန့်ပြန်မှုအနေဖြင့်အတွေ့အကြုံနည်းပါးသည့်ကုန်သည်များသည်၎င်းတို့ဆုံးရှုံးခဲ့ရသောအရာများကိုပြန်လည်ရရှိရန်ဟူသောအမြင်ဖြင့်အဓမ္မရောင်းဝယ်မှုများပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ နောက်ဆုံးတွင်ကုန်သည်သည်သူတို့၏ချေးငွေတစ်ခုလုံးဆုံးရှုံးသွားသည်ကိုမြင်တွေ့ရသောအောက်သို့လှည့်ထွက်သွားသည်။
တစ်ဖန်၊ AI ကုန်သွယ်မှုစက်ရုပ်များသည် ဘဏ္ဍာရေးစျေးကွက်များ၏ စိတ်လှုပ်ရှားမှု ရိုလာကိုစတာကြောင့် အဟန့်အတားမရှိပေ။ အရင်းခံဆော့ဖ်ဝဲလ်သည် ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော အခြေအနေများအပေါ် အခြေခံထားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ AI ဆော့ဖ်ဝဲလ်သည် ဤအခြေအနေများအပေါ်အခြေခံ၍ အဝယ်အရောင်းအမှာစာများကိုသာ ပြုလုပ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းသည် ဤကန့်သတ်ချက်များအပြင် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိပါ။ ရွှေတောင် by အသုံးချ သင့်ရဲ့ရေရှည်ဘဏ်က - စိတ်ခံစားမှုကိုအကြီးမားဆုံးခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုမှသက်သာစေနိုင်ကြောင်း AI အရောင်းစက်ရုပ်တစ်ခု။
Beg Beginners နှင့် Advanced Traders များအတွက်ကောင်းမွန်သည်
AI ကုန်သွယ်မှု ဘော့တ်များသည် အသစ်စက်စက် ကုန်သည်များနှင့် အတွေ့အကြုံရင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် သင့်လျော်သည်။ ယခင်နှင့် ပတ်သက် နောက်ခံဆော့ဖ်ဝဲ ယခင်က အတွေ့အကြုံ မလိုအပ်ဘဲ ငွေရေးကြေးရေး စျေးကွက်သို့ ဝင်ရောက်နိုင်စေပါသည်။ ယင်းအစား၊ သင်သည် သင်၏ AI ကုန်သွယ်မှု bot ကို ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နည်းလမ်းဖြင့် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ဝယ်ယူရောင်းချခြင်းအား ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်သည်။
အတွေ့အကြုံရင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများနှင့် ပတ်သက်လာလျှင် AI ကုန်သွယ်မှုပရိုဂရမ်များသည် သင်၏အွန်လိုင်းကုန်သွယ်မှု ကြိုးပမ်းမှုများကို နောက်တစ်ဆင့်သို့ တက်လှမ်းနိုင်စေပါသည်။ သိသိသာသာ ပိုကြီးသော သမိုင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်အစုံကို သင် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် သင်သည် သင့်လျော်သောနာရီများစွာကို ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနိုင်ပြီး အကန့်အသတ်မရှိသောစျေးကွက်များသို့ ဝင်ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
AI အရောင်းအ ၀ ယ်၏အန္တရာယ်များမှာအဘယ်နည်း။
အထက်ဖော်ပြပါ ကဏ္ဍတွင် ကျွန်ုပ်တို့တင်ပြထားသော အကျိုးကျေးဇူးများသည် စက်ရုပ်များကို ဆွဲဆောင်မှုရှိသော အလားအလာဖြစ်စေသော်လည်း အန္တရာယ်အချို့ကို သင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါသည်။ အမှန်တော့၊ AI အရောင်းအ၀ယ်က ဒီလောက်လွယ်တယ်ဆိုရင်၊ ငါတို့အားလုံးက အကန့်အသတ်မရှိ အမြတ်အစွန်းကို အာမခံဖို့ လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးလား။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ AI အရောင်းအ၀ယ်သည် 100% မိုက်မဲသောဖြစ်ရပ်မဟုတ်ပါ၊ ထို့ကြောင့် အောက်ပါအန္တရာယ်များကို သေချာသုံးသပ်ပါ။
the အခြေခံအုတ်မြစ်ဆော့ (ဖ်) ဝဲကဲ့သို့သာလျှင်ကောင်းသည်
ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်ချက်တစ်ခုလုံးတွင် ယခုအချိန်အထိ မှတ်သားထားပြီးဖြစ်သည့်အတိုင်း စက်ရုပ်များသည် အခြေခံဆော့ဖ်ဝဲလ်များကဲ့သို့သာ ကောင်းမွန်ပါသည်။ တစ်စုံတစ်ဦးကို ကိုယ်တိုင်လုပ်ရန် မမေ့ပါနှင့် ပုံစံပွင့်လင်းစျေးကွက်တွင် လုပ်ဆောင်ရန် ဆော့ဖ်ဝဲကို တည်ဆောက်ပါ၊ လေ့ကျင့်ပါ။
ထို့ကြောင့် AI trading bot ကို ထိထိရောက်ရောက် ဒီဇိုင်းထုတ်ခြင်းမပြုပါက၊ ဆော့ဖ်ဝဲသည် သင့်အား ငွေဆုံးရှုံးသွားဖွယ်ရှိသည်။
⚡ Shady AI အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ငန်း
အကယ်၍ သင်သည် 'အကောင်းဆုံး AI Trading Platform's' ဟူသော အသုံးအနှုန်းကို Google က သုံးပါက အမြတ်အစွန်းကို အာမခံကြောင်း ကတိပေးသော ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ ထောင်ပေါင်းများစွာကို တွေ့ရလိမ့်မည်။ တကယ်တော့၊ ဤ AI ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများသည် လက်တွေ့ဘဝထက်ကျော်လွန်သော လွန်ကဲသောတောင်းဆိုမှုများကို ပြုလုပ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် သင့်ငွေကို မခွဲထုတ်မီ အလွန်ဂရုတစိုက် နင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။
အရေးကြီးသည်မှာ အကယ်၍ AI ကုန်သွယ်ရေးပံ့ပိုးသူသည်သူတို့၏အခြေခံလျှို့ဝှက်ဆော့ဖ်ဝဲသည်အမြတ်အစွန်းများစွာရရှိပါကသူတို့၏လျှို့ဝှက်ဆော့စ်ကိုအများပြည်သူသို့အဘယ်ကြောင့်မျှဝေမည်ကိုသင့်ကိုယ်သင်မေးရန်လိုအပ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်လတ်တလောအမြတ်အစွန်းများများရရှိနေသောအောင်မြင်သော AI အရောင်းအဝယ် bot ကိုဝယ်ယူရန်လုံလောက်သောကံကောင်းနေပါက၎င်းသည်အလိုရှိသည်ဟူသောအာမခံချက်မရှိပါ။ အမြဲ ဖြစ်ရမယ် ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်ဘဏ္marketsာရေးစျေးကွက်၏ဖွဲ့စည်းပုံသည်အချိန်မရွေးပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ထို့ကြောင့်သင်၏ AI ကုန်သွယ်ရေးစက်ရုပ်အား၎င်း၏မဟာဗျူဟာထိရောက်မှုရှိစေရန်စဉ်ဆက်မပြတ်ပြုပြင်ရန်နှင့်ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်။ ဤအခြေအနေမျိုးတွင် AI အရောင်းအ ၀ ယ်သည် ၁၀၀% ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှုမဟုတ်ပါ၊ သင် ဆက်လက်၍ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကိုအချိန်အနည်းငယ်ပေးရန်လိုအပ်နေသေးသည်။
AI အရောင်းအဝယ်လုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ Bot ကိုမည်သို့ရွေးရမည်နည်း။
ထို့ကြောင့် AI trading bot ကိုအသုံးပြုခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများနှင့် အန္တရာယ်များကို ယခု သင်သိနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူကို သင်မည်ကဲ့သို့ရှာဖွေနိုင်သည်ကို ယခုကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆုံးစွန်အားဖြင့်၊ AI ကုန်သွယ်မှုဆော့ဖ်ဝဲပရိုဂရမ်နှစ်ခုသည် တူညီသည်။ ဒါကြောင့် သင်အောင်မြင်ဖို့ ဘာကိုရှာဖွေနေလဲဆိုတာကို အချိန်တစ်ခုပေးပြီး စဉ်းစားဖို့ လိုပါတယ်။
ဦးစွာပထမအနေနှင့်၊ သင်သည်သင်၏ AI ကုန်သွယ်မှု bot ကိုလည်ပတ်ရန်အတွက်သင်ထည့်သွင်းရန်မည်မျှထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်ကိုအကဲဖြတ်ရန်လိုသည်။ တစ်ဖက်တွင်၊ အချို့သော software algorithms များသည် ကြိုတင်ထုပ်ပိုးထားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သင်သည် စက်ရုပ်ကို ရိုးရှင်းစွာ အသက်သွင်းရန် လိုအပ်ပြီး ၎င်းသည် အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ရန် စတင်မည်ဖြစ်သည်။ တစ်ဖန်၊ သင့်ကိုယ်သင် ပြန်မေးရန် လိုအပ်သည်မှာ developer သည် ၎င်းတို့၏ အောင်မြင်သော နည်းဗျူဟာများကို ၎င်းတို့ တသမတ်တည်း အမြတ်အစွန်း ရပါက၊
spectrum ၏အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ သင်သည် AI စက်ရုပ်ကိုလိုက်နာရန် သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများကို သတ်မှတ်ရန်လိုအပ်ပေမည်။ ၎င်းသည် နည်းပညာဆိုင်ရာ အညွှန်းများနှင့် အချက်ပြမှုများကို နားလည်ခြင်းကဲ့သို့သော အွန်လိုင်းကုန်သွယ်မှုနေရာရှိ ကျွမ်းကျင်မှုအပိုင်းတစ်ခု လိုအပ်သော်လည်း၊ သင်သည် coding အတွေ့အကြုံ မလိုအပ်ပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့် AI အရောင်းအ၀ယ်ပံ့ပိုးပေးသူအများစုသည် ဆွဲယူ၍ချသည့် ဒီဇိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ပေးဆောင်သည်။
Your သင်၏ AI ကုန်သွယ်ရေးဆော့ဝဲလ်သည်မည်သည့်နေရာတွင်လည်ပတ်နိုင်သနည်း။
သင်၏ AI ကုန်သွယ်စက်ရုပ်သည် မည်သည့်နေရာတွင် အမှန်တကယ်လည်ပတ်နိုင်သည်ကို ယခုသင်စဉ်းစားရန်လိုသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သင်သည် ငွေကြေးဈေးကွက်များသို့ ဝင်ရောက်ရန် ပြင်ပပွဲစားတစ်ဦး လိုအပ်နေသေးသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ စံပြကမ္ဘာတွင် AI ကုန်သွယ်မှုစက်ရုပ်သည် MetaTrader4နှစ်ခုလုံးနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်မည် (MT4) နှင့် MetaTrader5(MT5) ။
ရာနှင့်ချီသော အွန်လိုင်းပွဲစားများသည် ဤကုန်သွယ်ပလပ်ဖောင်းများကို ပံ့ပိုးပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သင်၏ AI algorithm သည် သင်နှစ်သက်သော စျေးကွက်သို့ အတားအဆီးမရှိ ဝင်ရောက်နိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။
လူသိများသောပွဲစားပလက်ဖောင်းများကပံ့ပိုးသော AI အရောင်းအဝယ် bot ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသည့်အခါတွင်သင်ရောင်းဝယ်လိုသည့်ပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစားများကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ အမှန်မှာ AI စက်ရုပ်သည်အဓိကကျသော Forex အတွဲများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်သော်လည်း၎င်းသည်ရိုးရာစတော့ရှယ်ယာများနှင့်ရှယ်ယာများနှင့်သဟဇာတမဖြစ်နိုင်ပါ။
တစ် developer လျှင် တကယ်ပါ ၎င်းတို့၏ 'လျှို့ဝှက်ဆော့စ်' ကို အဖွင့်ဈေးသို့ ဖြန့်ချိရန် အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ၊ ၎င်းတို့သည် သင့်အား အထူးအခွင့်အရေးအတွက် ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်သည်။ အမှန်မှာ၊ bot သည် ဆက်တိုက်အမြတ်အစွန်းများရရှိနေကြောင်း သက်သေပြနိုင်ပါက အကောင်းဆုံး AI အရောင်းအ၀ယ်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများသည် ၎င်းတို့၏ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ချောမောစွာကောက်ခံရန် သင်မျှော်လင့်ထားမည်ဖြစ်သည်။
၎င်းတို့ပြုလုပ်ပါက၊ ၎င်းသည် လစဉ်စာရင်းသွင်းမှုတစ်ခုအဖြစ် လာပါသည်။ AI trading bot ကို ရိုင်းစိုင်းစွာ အသုံးပြုလိုသရွေ့ စာရင်းသွင်းမှုအား ဆက်လက်ပေးချေရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် လစဉ်ပုံမှန်ကောက်ခံသော ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများကို နှစ်သက်ပါသည်။ developer များသည် အရင်းခံဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ကြောင်း သေချာစေသောကြောင့် တစ်ခုတည်းသော အခကြေးငွေနှင့် ဆန့်ကျင်သည်။
ထို့ကြောင့်၊ သင်သွင်ပြင်ကိုနှစ်သက်သော AI trading bot ကိုသင်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့် ပွင့်လင်းဈေးမှာ တကယ်ဖျော်ဖြေမှာလားဆိုတာ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ bot သည် အမှန်တကယ်အသက်မရှင်မချင်း သင်မသိနိုင်ပေ။ သို့သော်၊ တရားဝင် bot ကို ၀ ယ်ရန်အခွင့်အရေးကိုတိုးမြှင့်ရန်သင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အရာအချို့ရှိသည်။
ပထမဦးစွာ၊ အများသူငှာ ဒိုမိန်းတွင် ရရှိနိုင်သော သုံးသပ်ချက်များကို အကဲဖြတ်ရန် အချိန်အနည်းငယ်ပေးပါ။ အကယ်၍ သင်သည် TrustPilot ကဲ့သို့ အဆင့်သတ်မှတ်သည့် ပလပ်ဖောင်းကို အသုံးပြုမည်ဆိုပါက၊ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များသည် စိစစ်ပြီးသော သုံးစွဲသူထောင်ပေါင်းများစွာတွင် အခြေခံထားကြောင်း သေချာပါစေ။ ဒုတိယအနေဖြင့်၊ ယုံကြည်ရလောက်သော AI ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းများသည် မှန်ကန်ကြောင်း အတည်ပြုနိုင်သည့် သမိုင်းဝင်ရလဒ်များကို အမြဲထုတ်ပြန်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ bot သည် အနည်းဆုံး လပေါင်းများစွာအတွင်း ကောင်းမွန်စွာ စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ကြောင်း သေချာစေပါ - သို့သော် ဖြစ်နိုင်ရင် အနည်းဆုံး တစ်နှစ်။
၂၀၀၀ အကောင်းဆုံး AI ကုန်သွယ်ရေးပံ့ပိုးသူများ
ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်ချက်ကို ဤအချက်အထိဖတ်ရှုပြီးပါက၊ AI အရောင်းအ၀ယ်စက်ရုပ်သည် မည်ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်ကြောင်း၊ ၎င်းတို့ကိုအသုံးပြုပုံအပြင် ၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများနှင့် အန္တရာယ်များကို အခိုင်အမာဆုပ်ကိုင်ထားသင့်သည်။ သင်၏ရေရှည်ကုန်သွယ်မှုလိုအပ်ချက်များအတွက် အလိုအလျောက်ဆော့ဖ်ဝဲအက်ပလီကေးရှင်းမှကမ်းလှမ်းသည့်အသံကို သင်နှစ်သက်ပါက၊ ယခုကျွန်ုပ်တို့သည် 2022 အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံပြုထားသော AI ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းများကိုစာရင်းပြုစုထားပါသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက “စက်သင်ယူမှုစာအုပ်များ"
မှတ်စု: အောက်ဖော်ပြပါ အကြံပြုပေးသူများစာရင်းတွင် AI အစုရှယ်ယာရောင်းဝယ်မှု၊ AI စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်ရောင်းဝယ်မှု၊ AI Forex ရောင်းဝယ်မှုနှင့် AI cryptocurrency ကုန်သွယ်မှုတို့ ပါဝင်သည်။
၁။ ကျွမ်းကျင်မှု - Beginners များအတွက်အကောင်းဆုံး Forex Trading Platform
အရောင်းအ၀ယ်မလုပ်ဖူးသောအစပြုသူများမှစပြီး ကျွမ်းကျင်ကျွမ်းကျင်သူများအထိ အဆင့်တိုင်းရှိ ကုန်သည်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ထူးခြားသောကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းတစ်ခုကို ဖန်တီးရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် မစ်ရှင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် လူတိုင်းကို ကမ္ဘာ့ဘဏ္ဍာရေးဈေးကွက်များနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ၎င်း၏အလားအလာများကို ၎င်းတို့အား ပြသသည့် ပလပ်ဖောင်းတစ်ခု ဖန်တီးလိုပါသည်။
အနည်းဆုံးအပ်ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀၀၊ လျှို့ဝှက်ကြေးနှင့်အကောင့်အားလုံးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြပါမည်။
ဒီစာကိုဖတ်နေတယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့မှာ နေရာအချို့ကျန်နေသေးတယ်လို့ ဆိုလိုပါတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာ သင်တွေ့ဖူးသမျှ အလျင်မြန်ဆုံး အမြတ်ငွေများ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး အမြတ်ငွေ ယူရို 261၊ €7,541 နှင့် ကုန်သွယ်မှုအပြီးတွင် ယူရို 67,454 အထိ အမြတ်အစွန်းများ စုဆောင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ဤစာမျက်နှာ၏ထိပ်ရှိ လုံခြုံသောနေရာတွင် သင့်အမည်၊ အီးမေးလ်၊ စကားဝှက်နှင့် ဖုန်းနံပါတ်တို့ကို ထည့်သွင်းပြီးသည်နှင့် စတင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ပြီးတော့အနည်းဆုံးယူရို ၂၅၀ ကိုစတင်ရန်လိုအပ်သည်။ သင်စာရင်းသွင်းထားသည့်အပ်ငွေစာရင်းရှိနှင့်ပြီးဖြစ်သောကြောင့်သင်လိုချင်သည့်အခါတိုင်းသင်၏ငွေအရင်းအနှီးကိုလည်းထုတ်ယူနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးပြုကုန်သွယ်ရေးနည်းပညာသည်ကမ္ဘာ့ crypto နှင့် Prof 24/7 အမြတ်အစွန်းကိုစောင့်ကြည့်သည်
စျေးကွက်များတွင် ကြီးမားသောဒေတာကို ဖြိုခွင်းလိုက်သော ပင်မဘောင်ပုံစံများ
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆာဗာများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်သွယ်ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို အမြန်ဆုံး Wall Street ကုန်သည်များမတိုင်မီ တစ်စက္ကန့်၏3သန်းသော အရောင်းအ၀ယ်အခြေအနေများတွင် သေးငယ်သောပြောင်းလဲမှုများကို တွေ့ရှိနိုင်စေပါသည်။
နည်းပညာဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးကူညီမှုအဖွဲ့သည် သင့်အား စတင်နိုင်ရန်နှင့် အခြားသော ကုန်သည်များနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတိုင်းထက် အထွတ်အထိပ် အားသာချက်တစ်ခု ပေးနိုင်ရန် သင်၏ ကုန်သွယ်မှုဆော့ဖ်ဝဲကို ထူထောင်ပြီး စောင့်ကြည့်ပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကြီးမားသောအခြေခံအဆောက်အအုံသည် မြင့်မားသည်ဖြစ်စေ နိမ့်သည်ဖြစ်စေ… မငြိမ်မသက်ဖြစ်စေ… သို့မဟုတ် အေးသည်ဖြစ်စေ စျေးကွက်များအတွက် လျင်မြန်သောတုံ့ပြန်မှုများကို အာမခံပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆော့ဖ်ဝဲသည် ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုကို ဘယ်တော့မှမဆုံးရှုံးစေရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းတွင် အဆက်မပြတ် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် လေ့လာသင်ယူပါသည်။
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရသော် AI Trading ဆိုင်ရာ ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်ချက်ကို တစ်လျှောက်လုံးဖတ်ရှုပြီးပါက၊ ဖြစ်စဉ်ကို မည်သို့လုပ်ဆောင်ကြောင်းကို ခိုင်မာစွာနားလည်ထားသင့်သည်။ အတိုချုပ်အားဖြင့်၊ AI-မောင်းနှင်သော ကုန်သွယ်မှု အယ်လဂိုရီသမ်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် 24/7 အခြေခံ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနိုင်မှု၊ စျေးကွက်များစွာကို ဝင်ရောက်နိုင်မှု၊ ကြီးမားသောဒေတာအတွဲများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး စိတ်လှုပ်ရှားမှုကင်းသော ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်နိုင်မှုစသည့် အကျိုးကျေးဇူးများစွာကို ပေးပါသည်။ ထိုသို့ပြောခြင်းဖြင့် သင်သည် အန္တရာယ်များနှင့် ပတ်သက်၍ လေးနက်သော ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်နေသေးသည်။
အရေးကြီးသည်မှာ၊ သင်ရွေးချယ်သည်ဟုအာမခံချက်မရှိပါ။ ဉာဏ်ရည်တု ကုန်သွယ်မှုပံ့ပိုးသူသည်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်သင့်လျော်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့်၊ အရင်းခံ algorithm သည် ၎င်းကို ဒီဇိုင်းထုတ်သူနှင့်သာ ကောင်းမွန်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ဆော့ဖ်ဝဲရေးသားသူသည် ၎င်းတို့၏လျှို့ဝှက်ချက်ကို အဘယ်ကြောင့် ထုတ်ပြန်ရသနည်းဟု သင့်ကိုယ်သင် မေးရန်လိုသည်။ ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာများ ဒါကြောင့်ဤမျှလောက်ပိုက်ဆံအောင်ခဲ့သည်လျှင်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်သင်၏ငွေနှင့်မခွဲခွာမီ AI ကုန်သွယ်ရေးပံ့ပိုးသူအားသင်ပိုမိုကောင်းမွန်စွာလုံ့လဝီရိယရှိရှိလုပ်ဆောင်ပါ။
အခမဲ့ကုန်သွယ် AI ဆော့ဖ်ဝဲကိုအသုံးပြုသင့်သလား။
ဘဝ၏အကောင်းဆုံးအရာများသည် အခမဲ့ဖြစ်သည်ဟု မကြာခဏပြောလေ့ရှိသော်လည်း - AI ကုန်သွယ်မှုနေရာ၌ ဤကိစ္စမျိုးမဟုတ်သည်မှာ သေချာပါသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့်၊ အခမဲ့ AI ကုန်သွယ်မှုစက်ရုပ်သည် ၎င်းကမ်းလှမ်းသည့်အရာတွင် အလွန်အကန့်အသတ်ရှိမည်ဖြစ်သည်။ ပြီးနောက်၊ developer သည် AI ကုန်သွယ်မှု algorithm တစ်ခုကို အခမဲ့ ပေးဆောင်ရန် အဘယ်ကြောင့် နာရီပေါင်းများစွာ သုံးစွဲနေရသနည်း။
ထောင်ပေါင်းများစွာသော AI အရောင်းအ၀ယ်ပရိုဂရမ်များသည် စျေးကွက်တွင်တက်ကြွစွာဖြင့် - အများစုမှာ hyperbole တောင်းဆိုမှုများတွင်ပါဝင်နေသောကြောင့်၊ ဂျုံကိုအဖျင်းနှင့်ခွဲထုတ်ခြင်းသည် လွယ်ကူသောလုပ်ဆောင်မှုမဟုတ်ပါ။ ထိုစကားဖြင့် သင်သည် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူအပေါ် လုံ့လဝီရိယကို တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်သင့်သည်။ ပြီးတော့ အရေးကြီးတာက AI စက်ရုပ်ရဲ့ သမိုင်းဝင်ရလဒ်တွေကို အတည်ပြုဖို့ ကြိုးစားပါ။
ဤမေးခွန်းအတွက်တစ် ဦး တည်းသောအရွယ်အစားနှင့်မကိုက်သောအဖြေမရှိပါ။ စျေးနှုန်းသည်ပံ့ပိုးသူနှင့်ပံ့ပိုးသူနှင့်ကွဲပြားလိမ့်မည်။ AI ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းအများစုသည်လစဉ်ကြေးပေးသွင်းရသည်။
ကျွန်ုပ်၏ AI အရောင်းစက်ရုပ်ကိုကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်နည်းဗျူဟာများကိုမည်သို့လိုက်နာနိုင်မည်နည်း။
အကယ်၍ သင့်တွင် AI မှတစ်ဆင့် အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်လိုသော သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကုန်သွယ်မှုဗျူဟာများရှိပါက၊ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူအများအပြားသည် ယခုအခါ အသုံးပြုရလွယ်ကူသော ဆွဲယူချပေးသည့်စနစ်ကို ပေးဆောင်ထားပါသည်။ ထို့ကြောင့်၊ သင်သည် coding အတွေ့အကြုံရှိရန်မလိုအပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးကိုမစွန့်စားဘဲကျွန်ုပ်၏ AI အရောင်းစက်ရုပ်ကိုစမ်းသပ်နိုင်ပါသလား။
အချို့သောပလက်ဖောင်းများသည်ပြည့်စုံကောင်းမွန်သောအိမ်တွင်းစမ်းသပ်မှုကိုပြုလုပ်သည်။ ဤသည်ကသင်သည်မည်သည့်ပိုက်ဆံမစွန့်ဘဲ, တော၌သင်၏ AI ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာစမ်းသပ်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
ကျွန်ုပ်၏ AI ကုန်သွယ်ရေးဆော့ဝဲလ်ကိုမည်သည့်ပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းများအသုံးပြုနိုင်ပါသလဲ။
၎င်းသည် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူမှ ပံ့ပိုးသူမှ ကွဲပြားမည်ဖြစ်သည်။ MT4 သို့မဟုတ် MT5 နှင့် သဟဇာတဖြစ်သော AI ကုန်သွယ်မှုဝန်ဆောင်မှုပေးသူကို အသုံးပြုပါက၊ သင်သည် Forex နှင့် CFD နှစ်ခုလုံးကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ငါဘယ်လို built-in မဟာဗျူဟာများနှင့်အတူ AI ကုန်သွယ်အစီအစဉ်ကိုရသနည်း
အကယ်၍ သင်သည် အလိုအလျောက် ကုန်သွယ်မှုတွင် ပါဝင်ရန် ရှာဖွေနေသော်လည်း သင့်တွင် ကိုယ်ပိုင် ဗျူဟာများ မရှိသေးပါက၊ အချို့သော ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများသည် သင့်အား ကြိုတင်ထုပ်ပိုးထားသော ဆော့ဖ်ဝဲကို ဝယ်ယူရန် ခွင့်ပြုပါသည်။ ၎င်းသည် သင့်အား ယခင်က ကုန်သွယ်မှုအတွေ့အကြုံမရှိဘဲ သင့်လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသည့် နည်းဗျူဟာကို ဝယ်ယူနိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။